Voces Bolivianas: Ny hoavin’ilay tanàna zandriny antsoina hoe El Alto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2018 20:26 GMT
(Marihina fa tamin'ny 24 Desambra 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nanomboka ny sary-sy-soratra mitondra ny lohateny hoe “La Ciudad del Alto y del futuro” (Ny Hoavin'ny Tanànan'i El Alto) ireo bilaogera avy amin'ny vondrom-piarahamonina virtoaly Jaqi Aru, izay nanaparitaka ny teny Aymara tao amin'ny aterineto tamin'ny alàlan'ny famoronana ny votoatin'ny fampitam-baovao nomerika. Nangataka ny fandraisana anjaran'ny mpianatra avy ao amin'ny Oniverisitem-panjakana ao El Alto mba hanome ny heviny momba ny tanàndehibeny ireo mpikambana ato amin'ity vondrom-piarahamonina ity. Tanàna itatra lehibe iray any an-tanandehiben'i La Paz i El Alto ary tombanana ho manodidina ny 900 000 eo ho eo ny mponina ao aminy. Nitombo hatrany izy hatramin'ny nialany tamin'i La Paz tamin'ny taona 1985 ary vao nankalaza ny faha-25 taonany.
Nanoratra i Nahir Nina Cerezo hoe :
Androany, manana endrika vaovao i El Alto, fantatra fa izy no tanàna zandriny indrindra ao Bolivia, izay nahitana ny fandrosoana sy ny firoboroboana tampoka teo amin'ny firafitry ny mponina. Izy no tanàna avo indrindra manerana izao tontolo izao ary miavaka amin'ny lembalemba midadasika sy ny talaky maso mahafinaritra manodidina azy, toy ny tendrombohitra, havoana, ary lemaka, izay hita eo am-pototry (ny tendron'i) Illimani, Illampu, Huayna Potosi, Chacaltaya, Mururata izay voarakotra ao anaty akanjo fotsy mamirapiratra .
Mahasarika mpifindra monina maro avy any amin'ny Altiplano Boliviana i El Alto, izay mitady asa sy fanabeazana tsara kokoa. Nanoratra momba ireo mpiasa mpifindra monina ireo i Javier Zepita Quispe:
Ahitana mpifindra monina avy any amin'ny toerana rehetra eto amin'ity tanàndehibe ity, ohatra: ny olona tsotra, mahantra, kanefa miasa, satria mifindra monina avy amin'ny vondrom-piarahamonina samihafa izy ireo ary izany no mahatonga ireo mponina ao El Alto heverina ho mpiady sy mpiasa .
Ato amin'ity tanàndehibe malalaka sy lehibe ity, ankoatra ny hatsiaka sy ny rivotra dia misy tendrombohitra lehibe toy ny Wayna Potosí sy Illimani izay saiky mandrakotra ny tanàndehibe iray manontolo miaraka amin'ny rakotra fotsy izay manintona mpizahantany manerana izao tontolo izao mba hizaha ireo trano izay manamorona ny tendrombohitra ary ireo trano fandraisam-bahiny sy ny zaridaina tsara tarehy izay hitantsika manerana ny lalambe andehanantsika isan'andro.
Ny orampanala eny an-tendrombohitra- El Alto, La Paz. Sary avy amin'ny mpisera flickr By Szymon Kochański. CC BY-NC-ND
Manana fanantenana ho an'ilay tanàndehibe i Nely Limachi Cocarico:
Amin'ny hoavy, ho tanàndehibe goavana i “El Alto” satria tanàndehibe manana mponina maro izy. Maro ny zavatra hiova miaraka amin'ny ezaka ataon'ny vahoaka. Ohatra: ho atao maoderina ny tranon'izy ireo, hisy ny sekoly, ny kolejy, ny oniversite, ny hopitaly maoderina, ary ho madio sy hatao rarivato ny arabe sy ny lalambe .
Na izany aza, misalasala momba ny hoavy i Román Salazar Luna ary mahita fa mbola misy olana maro atrehin”ny mponiny:
Ry mpamaky, ahoana no fomba hieretretan'ny olona fa ity tanàna ity no hoavin'i Bolivia? Raha mahita isika isan'andro ao afovoan-tanàndehibe fa miasa mafy mampiasa ny lamosiny ny olona mba hahazoana pesos vitsivitsy, manaraka ny dian'ny mpandeha an-tongotra eny an-dalambe izy ireo. Ary aoka tsy hohadinointsika ireo miverina vao maraimbe avy any an-tranon'izy ireo rehefa miposaka ny masoandro, izay mbola manohy ny asany isan'andro rehefa avy misakafo maraina ary miasa toy ny andiam-bitsika. Ary tsy izay ihany, araka ny hitantsika isan'andro ny fety sy ny fimamoana, ary ahoana ny momba ireo ankizy sy ny tanora, moa ve izy ireo tsy hianatra ireo fihetsika ireo, ary raha toa ka mamakafaka tsara io fanontaniana io isika, dia ho hitantsika fa aseho miharihary azy ireo ny fanarahana ireo fahazaran-dratsin'ny fiainana ireo. Koa nahoana isika no tokony hilaza fa ny ankizy no hoavin'ity tanàndehibe ity sy ho an'i Bolivia?